Shirkadeena waxay fiiro gaar ah siisaa kaliya dadaalka shaqaalaha laakiin sidoo kale shaqaalaha jirdhiska iyo maskaxda. Tusaale ahaan, shirkadayadu waxay qaban qaabin doontaa kulan isboorti si shaqaalaha loogu ogolaado jimicsi. Sannadkii hore, dhammaan shaqaaluhu waxay qayb ka qaataan isboorti. Intii uu socday kullamada isboortiga, waxaan gogol dhig u fidin ...
Shirka wacyi gelinta shaqaalaha ee cajiibka ah ee 2019 2020/6/15, shirkadeenu waxay qabatay Shirka 'Outensive Commendation Conference of 2019. Inta lagu gudajiray shirka, marka hore, maamulahayaga Mr.Xie ayaa soo koobaya guulaha sanadkii la soo dhaafay. Cabbirka iibka ee mashiinka is-toodinta ayaa kordhiyey ...
Hambalyo bogga internetka cusub ee Hangzhou Hongli Machines Co., Ltd. si rasmi ah ayaa loo bilaabay!
waxaa maamula 20-06-17
Shirkadda waxaa la aasaasay bishii Ogosto 2002 waxayna hadda leedahay inka badan 70 shaqaale iyo 8 xarumo farsamo. Shirkaddu waxay ku taalaa Magaalada Linpu Town Park Park, Xiaoshan, Magaalada Hangzhou, Gobolka Zhejiang, oo hal kiiloomitir u jirta goobta loo yaqaan Linpu Exit ee Wadada Hangjinqu ...